आज देखी ३ दिनसम्म चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । आज देखी तीन दिनसम्म देशका विभिन्न स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । नेपालमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु, पश्चिमको भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय...
अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा भएको अनियमिता छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । लकडाउनको समयमा विदेशमा अलपत्र परेका यात्रुबाट तेब्बरसम्म भाडा असुलेको गुनासोपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्...
अज्ञात समुहद्वारा पार्किङ गरि राखेको कारमा आगजनी
काठमाडौं। अज्ञात समूहदवारा पार्किङ गरि राखेको कारमा आगजनी गरेका छन । गोरखा नगरपालिका–८, चाइनिज धारा स्थित मोटर ग्यारेजमा पार्किङ गरेर राखेको कारमा आगजनी भएको हो । स्थानीय दिपक केसीको बा १२ च ५९८४ नम्...
टिप्परको ठक्करबाट प्रहरी हवल्दारको मृयु
काठमाडौं । हेटौंडामा टिप्परको ठक्करबाट प्रहरी हवल्दारको मृत्यु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार केशरदोर्जे थिङको गए राती ९ बजे टिप्परको ठक्करबाट मृत...
एसईईको नियमित परीक्षा नुहने, आन्तरिक मूल्याङकनबाट परीक्षा गरिने
काठमाडौं । यस वर्षको एसईईको नियमित परीक्षा नहुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यस वर्षको एसईई परीक्षा नहुने निर्णय गरेको हो । नियमित परीक्षा नगरी कानूनी रुपमा मिलाएर विद्यालयको आन्तरिक मू...
लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय, नीजि सवारी र बजार पनि खुल्ने
काठमाडौं । बुधबार राती बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत चैत ११ गते देखि जारी लकडाउन खुकुलो पार्नुका साथै, नीजि सवारी साधन चल्न दिने निर...
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण
सिरहा । प्रदेश- २ का सांसद दिलीप साहले विभिन्न विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न कम्प्युटर वितरण गरेका छन् । सिरहा क्षेत्र नं. ४ (क) का सांसद समेत रहेका साहले विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरलाई सु...
थप २७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,संक्रमितको संख्या ४ हजार ३६४ पुग्यो
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएकाे कोरोना भाइरस महामारी संक्रमित दिन प्रतिदिन थपिदै गएका छन । बुधबार एकै दिन २७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम...